Home » Travel Associations News » PATA dia manonona ny 2021 Face of the Future
Surayyal Hizmi nantsoina hoe 2021 PATA Face of the Future
Ramatoa Surayyal Hizmi dia mpampianatra ao amin'ny Polytechnic fizahan-tany any Lombok, nahavita ny mari-pahaizana Master tamin'ny taona 2017 tao amin'ny Applied Science miaraka amin'ny lohahevitra lehibe momba ny fitantanana harena voajanahary.
Pacific Asia Travel Association (PATA) dia fikambanan'ny mpikambana tsy mitady tombom-barotra izay miorina amin'ny fampandrosoana ny fizahan-tany sy fizahan-tany mankany, avy sy ao amin'ny faritra Azia Pasifika
PATA Face of the Future no voninahitra malaza indrindra misokatra ho an'ireo tanora matihanina amin'ny fizahantany any amin'ny faritr'i Asia Pacific
Surayyal Hizmi dia Mpanolotsaina Mpampianatra ao amin'ny PATA Lombok momba ny fizahantany Polytechnic Student Chapter
Surayyal Hizmi, Mpanolotsaina Mpampianatra ao amin'ny PATA Lombok Tourism Polytechnic Student Chapter, dia voatondro ho endrika PATA 2021 amin'ny ho avy. Ity no voninahitra malaza indrindra misokatra ho an'ireo tanora matihanina amin'ny fizahantany any amin'ny faritr'i Azia Pasifika.
"Tamin'ity taona ity dia nahazo lisitry ny mpangataka mahafinaritra izahay rehetra izay afaka mendrika izany fankasitrahana izany, ary mahatonga ahy hanana fanantenana fa tsy ho an'ny hoavin'ny indostria ihany fa ho an'ny ho avin'izao tontolo izao," hoy ny talen'ny talen'ny PATA Dr. Mario Hardy.
“Amin'ny anaran'ny olona rehetra ao amin'ny Fikambanan'ny dia lavitra any Azia Pasifika (PATA), Te-hiarahaba an'i Surayyal Hizmi aho tamin'ny fahazoana ny loka 2021 PATA Face of the Future. Nahazo aingam-panahy ny fahalalana ny fitiavany amin'ny faharetana sy ny fomba fandraisany anjara amin'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana manatratra io tanjona io. Ity loka ity dia hanome azy fampahafantarana bebe kokoa any Indonezia sy manerana ny indostria, ary antenaiko ny hivoatra ny asany rehefa miasa mifanaraka amin'ny PATA izy amin'ny fampandrosoana ny fizahan-tany sy fizahan-tany any amin'ny faritra. ”
“Faly be aho fa nahazo laza malaza toy izany. Zavatra tsy nampoiziko mihitsy izany, koa dia misaotra betsaka noho io fanekena anao io. Ny tena mpandresy amin'ity loka ity dia tsy izaho fa ireo olona maro izay nampahery ahy, toy ny fianakaviako sy ireo mpianatro izay miasa mafy manohana ahy hatrany. Ity zava-bita ity dia ho azy ireo sy ireo olona maro izay nanolotra ny fiainany sy ny ezaka nataony ho amin'ny fizahan-tany maharitra ary hahatonga an'ity tontolo ity ho toerana tsara kokoa, "hoy Ramatoa Hizmi.
Ramatoa Surayyal Hizmi dia mpampianatra ao amin'ny Polytechnic fizahan-tany any Lombok, nahavita ny mari-pahaizana Master tamin'ny taona 2017 tao amin'ny Applied Science miaraka amin'ny lehibe amin'ny fitantanana ny harena voajanahary. Ny fananana fahalalana mialoha momba ny fitantanana ny harena voajanahary sy ny harena voajanahary, ary ny siansa ara-tsosialy, ny finiavan-dRamatoa Hizmi dia ny hampihatra ny fahalalany sy ny fahaizany hanampiana ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana sy ny fampandrosoana maharitra amin'ny fizahan-tany sy fizahantany any Nusa Tenggara Andrefana. Amin'ny maha-mpampianatra azy ao amin'ny Polytechnic fizahan-tany any Lombok dia voatendry ho mpanampy ny talen'ny lefitra lefitra mifantoka amin'ny programa nasionaly sy fiaraha-miasa iraisam-pirenena izy. Nahatonga azy ho mpanolo-tsaina hanohanana ny oniversite amin'ny fampiharana ny hevitra maharitra. Mba hanatsarana ny fahaiza-manaony sy ny fahalalàny amin'ny faharetana dia nahavita ny fiofanana maharitra momba ny fizahan-tany tamin'ny taona 2020 izy ary nahazo mari-pahaizana momba ny fitohanana avy amin'ny Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Ny foto-kevitra, fahaiza-manao ary fahalalana azo tamin'ity programa ity dia nampiasaina ho an'ny programa PATA Lombok fizahan-tany momba ny fizahan-tany ho an'ny mpianatra Polytechnic toa ny ekozima sy ny zoro galona. Mavitrika ihany koa izy ankehitriny amin'ny tetikasa maro hafa izay miara-miasa amin'ny LIPI (The Institute of Science Indoneziana) sy ireo mpianatry ny oniversite aostralianina tamin'ny alàlan'ny Culinary Festival in Sepakek and Bambu Ecotourism any Sembalun mba hanitarana ny fampiharana ny faharetana.